PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ
ဦးအောင်သောင်းတို့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး တမန်တော်ကြီးအဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ စစ်ဘက်မှ ကေအိုင်ကေတို့ နေရာယူထားသော တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားစက်ရုံ တည်ရှိရာသို့ သွားသော လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားရန် တရုတ်ပြည် အစိုးရအား ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း ကေအိုင်အေနှင်ရ ၁၇ နှစ်ကြာချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အား စစ်ပွဲဖြင့် စတင်ပျက် ပြယ်စေခဲ့သော ပြည်တွင်းစစ်အား ပြန်လည်ငြိမ်းအေးရန် ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့ လုပ်လာကြသည်။ ထိုတာပိန်ေ၇အားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် တရုတ်ပြည်မှ အင်ဂျင်နီယာ ၉၀ ရာနုံန်းဖြင့် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ယူနန်ပြည်နယ် မီးလင်းရေးကို ဦးတည်ထားသော စက်ရုံဖြစ်သည့်အတွက် တရုတ်အစိုးရ၏ အထောက်ပံများ မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနောက်တွင် ရှိနေကြောင်း နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာမှ သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အတိလင်း ရေးသား ထောက်ပြထားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ၇က် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စစ်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသယ်အရေး နိုင်ငံတကာသို့ ပုံပွလာသောအခါ ဦးအောင်သောင်း နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းဇော်နှင့် ယခု ဦးအောင်မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်၇န် ရွှေလီတွင် ကေအိုင်ကေ အကြီးကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်းကို နိုင်ငံတကာသို့ လော်ဘီလုပ် ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နေ့ရက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ဖြင့် ကချင်ဒေသ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအတွင်းရှိ တပ်၇င်းတပ်ဖွဲ့များအား စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအား ၇ပ်တန့်ထားကြောင်း မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်ရေး အကဲခတ်များအား ဗြောင်လိမ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖားကန့်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ အပြင်းထန် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဆိုနိုင်သည်။
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်မည်ဟု လေလုံးထွားခဲ့သော ၀န်ကြီးများ အရှက်ကွပြီး မြားဦးလှည့်လာသည်မှာ ၇ခိုင်ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြသနာ စတင်ရန် ၀န်ကြီး လက်သယ်အချို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ရသော အကြောင်းရင်ခံ တခု အခိုင်မာ တင်ပြရသော် ရခိုင်ပြည်နယ်သားများ၏ အခွင့်ရေးအရ ခံစားပိုင်ခွင့်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့
လွှတ်တော်အမတ် (ကျောက်ဖြူမြို့နယ်) ဒေါက်တာအေးမောင် (၇ခိုင် အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဌ) နှင့် ဦးဘရှင်တို့ မှ ဇန်နာဝရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် နာစင်ရှိ၇ာနေရာသို့ လူထုအစည်းဝေးခေါ်ယူကာ ရခိုင်ပြည်သူများအား ရခိုင်ပြည်မှ ထွက်ရှိသော သံယံဇာတများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိကြောင်းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် မည်သို့ ပြဌာန်းထားကြောင်းကို စုရုံးခွင့် ရရှိသော လူထု ၅၀၀ အား ပြောကြားခဲ့သည်က စလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
Aye Maung said the main aim of holding the public conference is to mobilize the local Arakanese people as well as their brethren of other ethnic nationalities for their wider participation in making demands on the gas project for the development of Arakan State.
“We will make demands just for what we should get from our union and we hope all Arakanese people and our ethnic brothers with their kind hearts will support our move to strive for our regional development and hope the responsible authorities in all levels will do their best to meet our demands,” he said.
He also said his party would be able to make known to the central government what local people are expecting from the Shwe Gas Project after holding public conferences in the region, although lawmakers from his party had not received any positive answers from the union ministers when they raised questions about the project last September, with the aim of softening the stance of the central government over the region’s natural resources.
“No matter how the regional natural resources are being centralized in the 2008 constitution, we hope the government will consider the fact that every region or division needs to use its own resources for its development,” he said.
The regional election commission granted permission on 27 December for the RNDP to hold the public conference, which is scheduled from5pm to 11 pm on 1 January at the clock-tower grounds in Kyaukpru. It was learned that only 500 people are allowed to take part in the conference, and six senior leaders of the party, including Dr. Aye Maung and U Ba Shin, the legislator from People’s Parliament in Kyaukpru, will speak at the conference.
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်လွတ်ခါနီ အချိန်လေးမှာပင် အမေရိကန်အစိုးရမှ နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး ၂ ကြိမ်နှင့် အာရှရေးဆိုင်ရာ သံတမန်ကြီး တို့ ၁ကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့် ရသော အခြေနေအား ဗိုလ်သန်းရွှေတို့မှ ဖန်တီးကာ မက်လုံးပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုလွတ်လာသောအခါဝယ် လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဥပေးလမ်းကြောင်းမှပင် လျောက်လှမ်းစေရန် သံတမန်ကြီးများကလဲ ပထမဦးဆုံး သံခင်းစတင်ရေးသယ်ယူလာသော ဂျင်ဝက်ကဲ့သို့ပင် အခင်းကျင်းအထောက်ပံ့များ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို နေပြည်တော်မှ သဘောတော်ကျနေခဲ့ကြ၏။ ထိုကာလတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွသော အသွင်များသာ ရှေ့တန်းရောက်ရှိနေပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံး အလွန်သာယာသော အခင်းကျင်း ကြီးသဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
သိပ်မကြာ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၂ တွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ပြီးနောက်ပိုင်း မေလ ၂ ၇က်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွှတ်တော်တွင်း ကျမ်းကျိန်ဆိုပြီးနောက် ၃ ပတ်အကြာ မေလ၂၈ ရက်နေ့မှစကာ ပြသနာတက်တော့၏။
ကျောက်နီမှော်ကျေးရွာသူ မသီတာထွေးအား ရိုဟင်ဂျာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသား၃ ဦးမှ အဓမ္မပြုကျင့်သည်ကို ရွာသားများ သိသိခြင်းပင် သက်ဆိုင်ရာသို့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့ညတွင်းမှာပင် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း အားလုံးသိသည်။
ကျောက်နီမှော်ရွာသားများမှ ပြသနာတစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲ သက်ဆိုင်ရာ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုသာ မျှော်လင့်နေခဲ့သည်။ ၂၉ ရက်နေ့ မေလတွင် မသီတာထွေးအား မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်သူများဟူ ယူဆရသူ ၃ဦးအား မောင်းတော ရဲစခန်း၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့် လာရောက်စစ်ဆေးကြောင်း သတင်လွင့်ပြီး ကျောက်နီမှော် ရယက ရုံးတွင်ပင် အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၄င်းနေရာတွင် စောင့်ကြည့်နေကြသော ၇ခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဒေါသအိုးကို ပိုပြီး ပေါက်ကွဲလာအောင် ဒုရဲမှူး လှအေးမောင်က ဖန်တီးပြခဲ့၏။ မေလ ၃၀ ရက်တွင် ရခိုင် အမျိုးသားများ မကြေနပ်သံကျယ်လောင်ပြီး အုံးထနေသောကြောင့် ကျောက်နီမှော် ရယကမှ ရဲသို့ အကြောင်းကြားကာ အဆိုပါတရာခံ ၃ ဦးအား လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားစေခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်မှာ သမာရိုးကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ထိုအကွက်သည် ၀န်ကြီးအောင်သောင်းတို့၏ အကွက်ထဲသို့ ရောက်သွား၏၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီး ဦးလှမောင်တင်သည် ဦးအောင်သောင်း၏ ပေးတာယူ ကြွေးတာစားသော အခြွေရံဖြစ်နေခဲ့၏။ ဂျွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မူဆလင် ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးအား မူဆလင်များ၏ရှေ့မှောက်မှာပင် တောင်ဂုတ် ကားဂိတ်တွင် အုံးအုံးကြွက်ကြွက် သတ်ဖြတ်ပြခဲ့သည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ သံသယကင်းဖွယ် အစိုးရ လက်သယ်များ ပါဝင်ပတ်သက်နေ၏။ တောင်ကုတ် ကားဂိတ်တွင် နဆက အရာ၇ှိ ၃ ဦးမှ ကားပေါ်တက်ကာ မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရန် ကားပေါ်မှ အားလုံးဆင်းပေးရသည်။
ထိုနောက် မှတ်ပုံတင်များတဦးခြင်းစစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ မူဆလင် ၁၀ဦးနှင့် အခြားရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၄ ဦးကိုသာ ကာပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ပြုပြီး ကားထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ တောကုတ်ကားဂိတ်တွင် မြန်မာ အမျိုးသား ၆ဦးနှင့် ရခိုင်းအမျိုးသမီး ၅ ဦးကျန်နေရစ်သည်။ မူဆလင်၁၀ ဦးတွင် ပါလာသော လက်ကိုင်ဖုန်း၃လုံးးအား ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားမှု အထောက်ထား မခိုင်လုံဟု ဆိုကာ နဆကမှ သိမ်းယူထားလိုက်သည်။
တောင်ဂုတ် ကားဂိတ်မှ ကားစထွက်ပြီး ကိုက် ၃၀၀ လောက်မှာပင် ဆိုင်ကယ်စီးလူတအုပ်က ၄င်းကားအား တားဆီးပြီး ကားပေါ်တက်ကာ သတ်ဖြတ်နေသည်ကို လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော မောင်းတော ကားဂိတ်မှ လှမ်းမြင်နေကြသော နဆက နှင့် ရဲဝန်ထမ်းများ တုပ်တုပ်မျှမလှုပ်လှမ်းကြည့်နေခဲ့ကြသည်ဟု မောင်းတောကားဂိတ်တွင် ဆင်းကျန်ရစ်ခြင်းခံရသော ခရီးသယ်က ဖေါက်သယ်ချပါသည်။
၄င်းအမှုခင်းဖြစ်ပွားလာသည်နှင့် ပိုပြီး မီးတောက်ကြီးမားလာအောင်နေ့စဉ်ထုတ်အစိုးရ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ဂျွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောအရေးခင်းအား အသေးစိတ်ရေးသားဖေါ်ပြထားပေးပြီး မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသည့်အနေဖြင် ထပ်ပြီး ကြီးထွားအောင် သတင်းစာ တွင် စကားလုံး အသုံးနုံန်းများအား ခက်ခက်ထန်ထန်လုပ်ပေးလိုက်ကြ၏။
ဂျွန်လ ၈ ရက်နေ့ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီတွင် ရွှေဇာ ဗလီသို့ ၀တ်ပြု၇န်သွားရောက်ကြသော မူဆလင်လူငယ်များအားလုံးနီးပါ ဒုတ် ဓါး လက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ကာ ၄င်းဗလီကြီးအား စုရုံးသွားနေကြသည်ကို လုံခြုံရေးတာဝန်၇ှိသူနှင့် နဆက ၀န်ထမ်းများမှ ခွင့်ပြုခဲ့၏၊ အဆိုပါ နေခင်း ဗလီဝတ်ပြုပြီးသော နေခင်း ၁နာရီတွင် ဘန်ဂါလီမူဆလင်များသည် ၄င်းတိုပ ရွှေဇာ ဗလီမှ ထွက်လာသည်နှင့် မောင်းတောမြို့ရှိ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဘာသာဝင်များအား မီးကုန်ယမ်းကုန်တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ညနေ ၄ နာရီအထိ လုံခြုံရေးများ ရပ်ကြည့်နေခဲ့သည်။ မောင်းတောမြို့၏ အချက်ခြာကျသော အဆောက်ဦးများ စားသောက်ဆိုင်များ နေအိမ်များ အပြင် ကမ္ဘောဇ ဘန်တို့ကိုပါ အားရပါးရ ဖျက်ဆီးခွင့်ပြုခဲ့သည်ကို arakanland.com တွင် တင်ပြထားသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့် Eleven Media Group တို့မှ ၇ိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံအထောက်ထားများက သက်သေခံဖြစ်နေခဲ့သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့များတွင် ကြီးမားသော ရန်ပွဲများဆထက်တံပိုးကြီးမားခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ဂျွန်လ ၈ ရက်နှေ့ညမှ စတင်ကာ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ပုဒ်မ ၁၄၄ အား တမြို့ပြီးတမြို့ ထုတ်ပြကာ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပထမဆုံး ထိုးသွင်းခဲ့၏။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗိုလ်သန်းရွှေ့တို့ တရုတ်ပြည်အား ဂတိပြုထားသည့်အတိုင်း တာဝန်ယူထားသော ရခိုင်ပြည်မှ သွယ်တန်းထားသည့် ဂစ်ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဂစ်ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာဒေသ ၀န်းကျင်းအတွင် အဓမ္မ လယ်မြေသိမ်းမှုများအတွက် အမှောင်ချနိုင်ရန် စစ်တပ်ဖြင့် ထိန်းကွပ်ကာ အားလုံးနေရာယူသွားနိုင်အောင် အကွက်ကျကျ စီစဉ်သည်မှာ ထင်ရှားသိသာလွန်းသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအရေးခင်းမြင့်မားလာသောအခါ ရခိုင်တွင် ပွနေသော ဖရိုဖ၇ဲဘ၀များအားနိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများကြီးမားလာသောအခါ နေပြည်တော်မှ သမ္မတ အပါဝင် ၀န်ကြီးများမှ အကူညီပေးရေးအား ၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၂၂ တွင် အိုအိုင်စီအား ပြည်တော်သွင်းရန်း သဘောတူခဲ့ကြပြီး အိုအိုင်စီနှင့် စာချွန်လွှာ လက်မှတ်များရေးထိုးပြကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းပြည်အနှံ ဒေါသူပုန်ထအောင် စနက်တံ မီးတို့ပေးလိုက်ကြသည်။
ထိုနောက် မလေး၇ှားမှပေးပို့သော ရခိုင်ပြည်မှ ဒုက္ခသယ်များအတွက် ပေးပို့သော ပစ္စည်းထုတ်များတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသယ်များ၏ ဓါတ်ပုံးများ ဖေါ်ပြထားသည် စတေကာများအား ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၀၁၂ ခု စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အကောက်ခွန်ဌာနမှ အောက်ခံ ကပ်သွင်းပေးပြီး၊ ရခိုင်ပြည်ဘက်သို့ ပို့ကာ ထိုအထုတ်ပိုးများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသယ်ပုံရိပ်များကပ်ထားကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှ စတင် ဖေါ်ထုတ်ပြသသော သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သည့် ပုံရိပ်အား ငပွလုပ်ခဲ့ကြ၏။ (သတင်း အရင်းမြစ်သည် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းမှ)
The aid has been loaded into 40 containers and will be send on boardavessel from Port Klang.
“We will be transporting it byacommercial vessel as requested by the Myanmar government, and the vessel is expected to leave next Wednesday.
“It will take four days to reach Yangon Port, and from there, it will take us two days by truck to reach Rakhine state,” he said.
He hoped that Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and former prime minister Tun Dr Mahathir Mohamad would be able to send off the vessel.
Abdul Azeez thanked the Myanmar government for its support and cooperation in helping the club to undertake the humanitarian mission.
Read more: Humanitarian aid to people in Rakhine, Myanmar - Latest - New Straits Times http://www.nst.com.my/latest/humanitarian-aid-to-people-in-rakhine-myanmar-1.145809#ixzz2Omi4UNae
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအထဲတွင် အတွေးခေါ် အားနည်းသော ၊ ဘာသာတရားအား တရားဟောဆရာ မော်လီဆပ်များမှ ပြောသောစကားများကိုသာယုံကြည်သော မြို့ပေါ်မှ မူဆလင်အချို့များ နှင့် မြန်မာပြည်အားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျမှ ခိုးဝင် အချေချ လာသော ယခုခေါ်ဆိုနေကြသော ရိုဟင်ဂျာများအဖို့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြန်မာပြည်မအတွင်း အများစုကိုးကွယ်ကြသော ဗုဒ္ဒဘာသာအား လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆက်ဆံပြုမူနေထိုင်မှု မရှိကြသောကြောင့် အဆိုပါ ဘာသာနှစ်ခုအကြားတွင် ကသိကအောင့်လေးလုပ်ပေးလိုက်သည်နှင့် ယမ်းပုံမီးကျ ပေါက်ကွဲတတ်ကြောင်း ကြံ့ဖွတ်အမတ်များက သိကြလေသည်။
အပိုင်း ၃ အား မတ်လ ၂၈ ၇က်နေ့တွင် ထပ်မံ တင်ပြပေးပါမည်။
သတင်းရင်းမြစ် - Minmaha Bagan(FB) သတင်းစာမျက်နှာမှ
Posted by PNSjapan at 9:00 AM